Khasaaraha Ka Dhashay Duufaanta Ku Dhufatay Chine Oo Sii Korortay. – Calamada.com
Khasaaraha Ka Dhashay Duufaanta Ku Dhufatay Chine Oo Sii Korortay.
calamada September 17, 2018 2 min read
Wadanka Shiinaha oo kamid ah wadamada dhaca bariga qaarada Asia warar la helayo ayaa sheegaya in duufaantii loogu magac daray Boqorka Duufaanada ay ku dhufatay, gobolo iyo magaalooyin kamid ah wadankaas, ayna geystay khasaarooyin kala duwan.
Duufaanta ayaa saacidihii lasoo dhaafay ku dhufatay gobolka Guwang dong iyo QuangShi oo kamid ah gobolada ugu dadka badan wadanka Shiinaha, waxaana lagusoo waramayaa inay wadato dabeylo xoogan iyo Roobab aan kala go’o laheyn.
Xukuumada Shuuciyada ah ee Shiinaha ayaa ku guuleysatay in magaaloyinka ay duufaantu ku dhufatay ay kasoo saarto dadki ku sugnaa, kuwaas oo loo daad gureeyey goobo aamin ah oo dowladu ay diyaarisay.
Inta la xaqiijiyey ilaa 8 qof oo udhashay wadanka Shiinaha ayaa duufaantan ku dhintay, in ka badan 70 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo, balse waxaa jiro dad reer miyi ah oo dhulka howdka ku sugan, kuwaas oo ilaa iyo hada aan lagu guleysan in la gaaro, waxaana la filayaa in saacadaha soo socdo faafihinado ay isa soo taraan.
Dhamaan adeegyadii ganacsi ee gobolada Guwang dong , QuangShi iyo caasimada ganacsiga Shiinaha ee Hong Kong ayaa albaabada la isugu dhuftay, waxaana la xiray garoomadii, dekedihi, shirkadihii shidaalka iyo xitaa ganacsigi caadiga ahaa ee magaalooyinka ka jiray, sidoo kalena waxaa la yareeyey adeegtada koronto ee halkaas gaari jiray, si looga fogaado khatarta ay leedahay hadii ay fatahaado dhacaan.
Roobabka iyo duufaanada is wata ayaa keenay in fatahaado ay sameynayaan Badda iyo Wabiyadii mari jiray qaar kamid ah magaalooyinka ay iminka ku dhufatay, waxaana lasoo sheegaya in meelaha qaar moojadaha hirka ee badda ay gaareen 1 Mitir ilaa 3 Mitir, halka magaalooyinka dhexdoodana biyaha fatahaadaha ay sare u dhaafeen 1 Mitir.
Duufaantan oo horey usoo martay wadanka Philippine iyo qaar kamid ah jazeeradaha dhaca Badda Atlantic, ayaa horey usoo dishay boqolaal qof, xukuumada Philippine waxa ay shaacisay in tirada dhimashada ay sare usii kacday gelinki danbe ee shalay, hadana ay sii mareyso ilaa 70 qof.
Marka lagasoo tago khasaaraha nafeed, duufaanada waxa ay geysteen khasaare dhaqaale oo baaxad leh, khubarada dhanka dhaqaalahana waxa ay sheegayaan in hantida ku baaba’day ay gaareyso Balaayiin Dollar.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.07-01-1440 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 07-01-1440 Hijri.